Ungalinceda njani iqabane lakho loyise intlungu | Bezzia
Ukuphulukana nomntu omthandayo yenye yezinto ezimbi ezenzeka emntwini. Inkqubo yokuba lusizi inzima kakhulu kwaye ukuba nomntu osondeleyo kuwe wokukunceda ukuba udlule kumbono onjalo kubaluleke kakhulu. Kwintlungu inkalo yeemvakalelo ibaluleke kakhulu kwaye kuyinto eqhelekileyo ukuba umntu obandezelekileyo abe nomsindo, abe nomsindo okanye angabi nakuzinceda.
Njengoko bekulindelekile, Ezo mvakalelo zinempembelelo embi kwikamva elihle lesi sibini. Yiyo loo nto esi sibini sinendima ebalulekileyo ekuncedeni omnye umntu oyise ixesha lokuzila.
Izikhokelo ekufuneka zilandelwe ukunceda isibini soyise i-duel
Eyona nto ibalulekileyo xa kufikwa ekuncedeni isibini soyise ingxaki enzima njengokusweleka komntu esimthandayo, Kukuvelana nayo kwaye uyibonise yonke inkxaso enokwenzeka. Ukusuka apha kuyacetyiswa ukuba ulandele uluhlu lwezikhokelo okanye iingcebiso:
Ukukhanyela lixesha elinzima athi nabani na osezilileni adlule kulo. Umsebenzi wesibini kufuneka ube kukuzama ukwenza umntu akwazi ukwamkela ilahleko kunye yokushiya inyalelo ecaleni kuyo yonke into.
Kumaxesha anzima ngolo hlobo, umntu oye walahlekelwa yintlungu akafanele azive elilolo. Kungumsebenzi wesibini ukubaxhasa kuyo yonke into eyimfuneko kwaye menze abone ukuba akayedwanga. Ukuwola nje ngokulula okanye incoko inokuba ngaphezu kokwaneleyo ukukunceda ujamelane nentlungu.
Akulungile ukuba umntu osentlungwini azithulele ngokwakhe iimvakalelo zakhe. Kubaluleke kakhulu ukuba ukwazi ukuvakalisa oko uziva ngokwenene ngalo lonke ixesha. Isibini siyinxalenye ebalulekileyo xa umntu obandezelekileyo ekwazi ukuzisa ekukhanyeni iimvakalelo ezahlukeneyo.
Intlungu yinkqubo ende kunye neyinkimbinkimbi engonakalisa naluphi na uhlobo lobudlelwane. Isibini kufuneka silawule ukukhathalela ubudlelwane obukhankanywe ngasentla kangangoko sinakho kwaye sikuphephe ngamaxesha onke ukuba sinokucaphuka. Kuya kufuneka uyazi indlela yokunyamekela iqabane lakho, ukuze kancinci kancinci ukwazi ukoyisa umzuzu onzima nonzima. kunjani ukusweleka komntu omthandayo.
Kubaluleke kakhulu ukuba umntu oye waphulukana nelahleko unokuva ngokukhululekileyo intlungu yakhe kunye dlula kwizigaba ezahlukeneyo zeduel ngaphandle kwengxaki. Isibini kufuneka sibe ngumthombo wenkxaso okanye inkxaso kodwa singabi ngumntu ocinezelayo ukuze ukudlula kwiduel kukhawuleze kangangoko. Ukuba isigaba sosizi sihlala ixesha elide kunokuba kulindelwe, kulungile ukuya kwingcali ukuze uncede ukunqoba ingxaki enjalo.
Ngamafutshane, akukho lula okanye kulula ukuba neqabane elizilele ukufa komntu omthandayo. Kwezi meko, inkxaso yeqabane iba yimfuneko kwaye iyimfuneko ukuze inkqubo enjalo yoyiswe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Ubudlelwane » Indlela yokunceda iqabane lakho ukuba linqobe intlungu